कति स्वस्थकर छ त चिज ? - ज्ञानविज्ञान
कति स्वस्थकर छ त चिज ?
चिजमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा पनि धेरै हुन्छ, स्याचुरेटेड फ्याटले एलडिएल (लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन) अर्थात् मुटुका लागि खराब कोलेस्टेरोल बढाउँछ। साँच्चै भन्नुपर्दा अमेरिकीहरूको भोजनमा स्याचुरेटेड फ्याटको प्रमुख स्रोत चिज नै हो।कडाभन्दा नरम चिजमा क्यालोरी थोरै हुन्छ, अप्रशोधित दूधबाट बनेको करिब दुई चम्चा (एक औंस) रिकोटा चिजमा ५० क्यालोरी हुन्छ भने त्यति नै फेटा चिजमा ७५ क्यालोरी र मोजारेला चिजमा ८५ क्यालोरी हुन्छ।
चिज पोषणले भरिपूर्ण छ र स्वादिलो पनि। तर, यसको उपभोग भने सानो–सानो परिमाणमा गर्नु बेस हुन्छ। ‘चिजमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन बी१२, जिंक लगायत महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाइन्छन्। तर, यसले हामीलाई धेरै क्यालोरी पनि दिन्छ,’ भन्छिन् पोषणविद् तथा एकेडेमी अफ न्युट्रिसन एन्ड डाएटिक्सकी प्रवक्ता केली प्रिचेट।
तर, त्यति नै स्विस चिजमा १ सय ८ क्यालोरी र सेडारमा १ सय १४ क्यालोरी हुन्छ। क्यालोरीको मात्रा चिजको प्रकारमा भर पर्छ। यति नै क्यालोरी पाउन हामीले कालो सिमीको एक कप सुप खानुपर्छ । डेनमार्कको डेरी बोर्डको सहयोगमा भएका केही अनुसन्धानले चिजमा पाइने स्याचुरेटेड फ्याटको आधारमा यसअघि गरिएका अनुमान विपरीत चिजले एलडिएल कोलेस्टेरोलमा कुनै प्रभाव नपार्ने देखाएका छन्।
‘क्याल्सियम वा प्रोटिनजस्ता चिजमा पाइने अन्य पोषणजस्तै स्याचुरेटेड फ्याट कसरी हाम्रो शरीरले पचाउँछ, जानकारी पाउन सकिएको छैन,’ भन्छन् नेसनल डेरी काउन्सिलका चिफ साइन्स अफिसर ग्रेगरी डी मिलर।
र जब फ्याटको मात्राको कुरा आउँछ, केही चिजमा अन्यभन्दा थोरै फ्याट हुन्छ। फ्याटको मात्रा धेरै हुँदा क्यालोरी पनि धेरै हुन्छ। कटेज चिजमा सबैभन्दा थोरै फ्याट हुन्छ, एक औंस चिजमा १ ग्राम मात्र। रिकोटा चिजमा एक औंसमा ४ ग्राम फ्याट हुन्छ भने फेटा र मोजारेल चिजमा ४ ग्राम फ्याट पाइन्छ। पार्मिसान, स्विस र सेडार चिजमा अन्य चिजभन्दा बढी अर्थात् क्रमशः ७, ८ र ९ ग्राम फ्याट पाइन्छ।
‘तपाईं क्यालोरी घटाउन चाहनु हुन्छ भने मोजारेलाजस्ता नरम चिजले तपाईंलाई सघाउँछन्,’ भन्छिन् प्रिचेट । धेरै क्यालोरी भए पनि सेडारजस्ता कडा चिज हाम्रो दाँतका लागि निकै उपयुक्त हुन्छ। किनभने, यसबाट क्याल्सियमसँगै अन्य खनिज पदार्थ पाइन्छ। साथै, कडा चिजले हाम्रो मुखमा र्‍यालको उत्पादन बढाउँछ। मुखमा जति धेरै ¥याल बन्छ, त्यति नै मुखमा अम्लियपना पनि घटाउँछ र दाँतमा किरा लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।
चिजलाई भोजन स्वादिलो बनाउन मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छिन् प्रिचेट। उनी सलाद स्वादिलो बनाउन नरम वा बाख्राको चिजका ससाना टुक्रा भोजनमा राख्न अथवा आफ्नो मनपर्ने सुपमा चिज हाल्न सल्लाह दिन्छिन्। स्न्याक्ससँग खाँदा भने उनी १ औंसमात्र चिज खान सुझाउँछिन् । थोरै–थोरै मात्रामा चिज खाँदा हाम्रो शरीरमा सोडियमको मात्रा वा स्तर पनि बढ्दैन। १ औंस नरम फेटा चिजमा २ सय ६० मिलिग्राम र कडा पार्मिसनमा ३ सय ९० मिलिग्राम सोडियम हुन्छ। आनन्दपूर्वक स्वाद लिएर चिज खानुहोस्, तर एकैचोटी धेरै होइन थोरै–थोरै मात्रामा।
Topics #चिज #स्वस्थकर
Don't Miss it कपाल प्रत्यारोपण कति सुरक्षित छ ?
Up Next पूरै गाउँलाई बन्धक बनायो भालुको बथानले
सनग्लास लगाउन मन पर्छ कि पर्दैन ? मन नपरे पनि लगाउने गर्नुहोस् – यस्ता रोग लाग्न बाट बच्नुहुनेछ
भूकम्प र झरीको हैरानी कमकम हुँदै गएसँगै घाम चर्किन थालेको छ । उपत्यका जस्तो उचाइमै चिरिक्क पोल्ने तराईमा कस्तो असर…
लसुनमा मह मिलाएर खानुको चामत्कारिक फाइदा जानिराखाै
लसुन र मह (हनी) को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान् । हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ…
सचेत हुनुस्, हिप दुखाइबाट खुट्टै गुम्न सक्छ
हिपको दुखाइले धेरैलाई समस्यामा पारेको हुन्छ । तर, यस्तो दुखाइलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । किनकि, यसले जटिल समस्या पनि…
औषधीय गुण बाेकेकाे हुन्छ पालुंगो सागले, जान्नुहाेस् यसकाे फाइदाबारे
पालुंगोको साग खानमा मात्र स्वादिलो हुँदैन यो स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी हुन्छ । यसको सेवनले शरीरमा रगतको कमी भएकाहरुका लागि…
किन केटाकेटीकाे दाँतमा बढि किरा लाग्ने गर्छ ? जान्नुहाेस्
तपाईँको दाँतमा किरा लागेको छ ?छैन ? छैन भने ठिकै छ । यदीे छ भने त बेला बेलामा दुखाईको अनुभव…
यी ९ चीज अनुहारमा लगाउनुको फाइदा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ
दैनिक व्यस्त जीवनशैलीका कारण त्वचाको हेरचाह गर्न कठिन हुन्छ । यसकारण राती सुत्नुअघि अनुहारमा केही चीज लगाउन सकिन्छ । यी…
किन काउकुती लाग्छ र लागेपछि किन हाँसउठ्छ ? जान्नुहोस
वैज्ञानिकहरूका अनुसार काउकुती लाग्दा मानिसको दिमागको त्यही भाग सक्रिय हुन्छ जसले व्यक्तिलाई पीडाको पनि सूचना दिने गर्छ । त्यसैले काउकुती…
यी हुन् रायोको साग खानुका अचुक फाइदाहरु, थाहा पाउनुस्
रायोको सागलाई मस्टर्ड ग्रिन्सको नामले पनि चिनिन्छ । यो विश्वमै बढी स्वस्थकर तरकारीमा पर्ने गर्छ । यो विश्वमा उपलब्ध तरकारीमध्ये…